2 Ahene 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Ahene 11:1-21
11 Ahasia+ maame Atalia+ hui sɛ ne ba no awu. Enti ɔsɔre kunkum ahenni no asefo+ nyinaa. 2 Nanso Ɔhene Yehoram babea Yehoseba+ a ɔyɛ Ahasia nuabea no faa Ahasia ba Yehoas,+ na owiaa no fii ahenemma a na wɔrekunkum wɔn no mu, ɔne ɔbea a ɔhwɛ no no, na ɔde no kohintaw ɔdan a mpa sisi mu no mu. Wɔde abofra no hintaw+ Atalia, enti wɔannya no ankum no. 3 Ɔne no tenaa Yehowa fie hɔ ahintawee mu mfe asia bere a Atalia di asase no so no.+ 4 Na afe a ɛto so ason mu no, Yehoiada+ soma kɔfrɛɛ Karia+ awɛmfo ne ammirikatufo+ ɔha ha so mpanyimfo no baa ne nkyɛn wɔ Yehowa fie, na ɔne wɔn yɛɛ apam+ ma wɔkaa ntam+ wɔ Yehowa fie hɔ, na ɛno akyi no, ɔde ɔhene ba no kyerɛɛ wɔn. 5 Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ: “Nea monyɛ ni: Mo mu nkyem abiɛsa mu biako mmra homeda, na mommɛwɛn ahemfie+ no yiye; 6 nkyem abiɛsa mu biako nkɔ Nnyinaso Pon+ no ano, na nkyem abiɛsa mu biako nso mmegyina ɔpon a ɛwɔ ammirikatufo no akyi no ano; obiara nnyina ne gyinabea nwɛn ofie+ no yiye. 7 Mo mu akuw abien a wɔn nyinaa fi adi kɔ homeda no, wɔn nso nwɛn Yehowa fie no yiye, ɔhene no nti. 8 Na obiara mfa n’akode nkura ne nsam, na muntwa ɔhene no ho nhyia. Obiara a ɔbɛba awɛmfo no mu no, munkum no. Munnnyaw ɔhene, ne nkɔree ne ne mmae mu.” 9 Enti ɔha ha so mpanyimfo+ no yɛɛ nea ɔsɔfo Yehoiada kae no nyinaa. Na wɔn mu biara de ne mmarima a wɔreba hɔ homeda+ abɛsom ne wɔn a wɔabɛsom na wɔrekɔ homeda no bae, na wɔbaa ɔsɔfo Yehoiada nkyɛn. 10 Afei ɔsɔfo no de Ɔhene Dawid mpeaw ne akyɛm nketewa a ɛwɔ Yehowa fie hɔ no maa ɔha ha so mpanyimfo+ no. 11 Na ammirikatufo+ no nyinaa faa wɔn akode kurakuraa wɔn nsam, na wogyinagyinaa ofie no benkum ne ne nifa so ne afɔremuka+ no ho ne ofie no ho, na wotwaa ɔhene no ho hyiae. 12 Ɛnna ɔde ɔhene ba+ no fii adi bae, na ɔde ahemmotiri+ bɔɔ ne ti, na ɔde Adanse+ no too ne ti so. Wɔsraa no,+ na wosii no hene.+ Afei wɔbobɔɔ wɔn nsam+ kae sɛ: “Ɔhene nnya nkwa!”+ 13 Bere a Atalia tee gyegyeegye sɛ ɔman no retu mmirika no, ɛhɔ ara na ɔbaa nkurɔfo no nkyɛn Yehowa fie hɔ.+ 14 Ɔhwɛe no, ohui sɛ ɔhene no gyina edum no ho+ sɛnea amanne te, na mpanyimfo ne ntorobɛnto+ wɔ ɔhene no nkyɛn, na ɔman no mu nnipa nyinaa redi ahurusi+ na wɔrehyɛn ntorobɛnto. Ɛhɔ ara na Atalia+ suan n’atade mu na ɔteɛɛm sɛ: “Atirisopam! Atirisopam!”+ 15 Ɛnna ɔsɔfo Yehoiada frɛɛ ɔha ha so mpanyimfo ne asraafo so mpanyimfo+ no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Montwe no mfi nnipa no mu, na obiara a obedi n’akyi no, momfa nkrante nkum no!”+ Ná ɔsɔfo no aka sɛ: “Munnkum no wɔ Yehowa fie.” 16 Enti wɔde wɔn nsa soo no mu, na wɔde no beduu apɔnkɔ pon+ no ano, ahemfie+ hɔ, na wokum no wɔ hɔ.+ 17 Ɛnna Yehoiada maa ɔhene+ no ne ɔman no nyinaa ne Yehowa+ yɛɛ apam+ sɛ wɔbɛyɛ Yehowa man; na ɔmaa ɔhene no ne ɔman no nso yɛɛ bi.+ 18 Ɛno akyi no, ɔman no mu nnipa nyinaa kɔɔ Baal fie hɔ, na wodwiriw n’afɔremuka no gui;+ wobubuu n’ahoni no pasaa,+ na Baal sɔfo Mattan+ nso, wokum no afɔremuka no anim.+ Na ɔsɔfo no de ahwɛfo sisii Yehowa fie so.+ 19 Afei ɔfaa ɔha ha so mpanyimfo ne Karia+ awɛmfo ne ammirikatufo+ ne ɔman no mu nnipa nyinaa sɛ wɔmfa ɔhene no mfi Yehowa fie hɔ mmra. Enti wɔfaa ammirikatufo pon+ no mu kɔɔ ahemfie hɔ, na ɔhene no tenaa ahengua+ no so. 20 Na ɔman no mu nnipa nyinaa kɔɔ so dii ahurusi,+ na asomdwoe baa kurow no mu. Atalia de, wɔde nkrante kum no ahemfie hɔ.+ 21 Yehoas+ bedii ade no, na wadi mfe ason.+
2 Ahene 11